Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2019
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Oktobra, 2019
Ny fiantraika ratsin'ny gripan-kisoa Afrikanina amin'ny krizin'ny famatsiana kisoa ao Shina?
Tamin'ny volana septambra, herinandro vitsivitsy alohan'ny faha-70 taonan'ny fiorenan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, nanomboka namoaka ireo fitehirizana stratejika henan-kisoa nampangatsiahana mivaingana ny governemanta shinoa mba hamaliana ny filàna henan-kisoa eo amin'ny tsena anatiny.
Oganda: Nandrava ny tsenan'i Owino ny afo
Afrika Mainty 31 Oktobra 2019
Afo goavana no nandevona ny tsenan'i Owino tao Kampala tamin'ny alarobia maraina, ka olona dimy no naratra mafy ary trano an'arivony no simba. Tombanana ho niharan'ny fatiantoka ireo mpivarotra miisa 25 000, izay vehivavy no ankamaroany.
Miady amin'ireo fanafody hosoka amin'ny alalan'ny sehatra antserasera vaovao ny startup teknolojia ao Tanzania
Matoky i Dagaa fa tsy ny fotoana ihany no ho voatsitsy hitadiavana magazay mivarotra fanafody amin'ny vidiny mirary avy amin'ny rafitra antserasera vaovao, fa koa hanampy hanara-maso ireo vokatra fanafody apetraka eny an-tsena, mampihena ny fividianana fanafody hosoka.
Gazety aostraliana manohitra ny lalànan'ny governemanta momba ny tsiambaratelo amin'ny alalan'ny sivana ny lohatenim-pejiny
Oseania 29 Oktobra 2019
"Saingy miaina anatin'ny tahotra fiampangana heloka bevava ny mpanao gazety sy ny mpitsikera any Aostralia, amin'ny fanafihana ataon'ny polisy sy ny ady ara-pitsarana izay mandrahona ny asan'izy ireo sy ny fahalalahan'izy ireo manokana."
Manana antony roa fanampiny hitarainana momba ny fifamoivoizana ny renivohitr'i Bangladesh
Azia Atsimo 26 Oktobra 2019
"Mijaly mafy ny olona noho ny fitohanan'ny fiara, mila fialan-tsasatra ny vahoaka, vitao azafady ny tetikasa Metrorail voalohany".
Nanala ny ampahany tamin'ny fanapahana ny fifandraisana ao Kashmir i India, mbola tapaka kosa ny aterineto
Azia Atsimo 24 Oktobra 2019
Araka ny tatitra vao haingana, manohitra ny famoretana sy ny fanakatonana ny fifandraisana napetraky ny governemanta Foibe Indiana ny Kashmirita "amin'ny alalan'ny satyagraha na tsy fankatoavana sivily tsy misy herisetra".
Mahafaty olona ny firotsahan'ny polisy an-tsehatra ao Ginea, mifikitra amin'ny fitondrana i Alpha Condé
Afrika Mainty 18 Oktobra 2019
Manao herisetra mahafaty olona ny polisy ao Ginea raha miezaka manova ny lalampanorenana ny filoha ao mba hifikirana eo amin'ny fahefana
Nilaza ireo vahoaka voalohany ao Trinite fa tsy tokony ovaina ny anarana indizeny amin'ilay seranam-piaramanidina
Karaiba 15 Oktobra 2019
Nampisara-kevitra ny vahoaka ny fanambaràna nataon'ny praiminisitr'i Trinite amin'izay mety hanovana ny anaran'ny seranampiaramanidina iraisampirenena Piarco ho Eric Williams.
Thailandey mpitsara nitifi-tena tao amin'ny efi-pitsarana taorian'ny filazany fa misy fitsabahana ara-politika amin'ny famoahana didim-pitsarana
Azia Atsinanana 15 Oktobra 2019
"Avereno amin'ny mpitsara ny didim-pitsarana. Avereno amin'ny vahoaka ny rariny. Mety ho maivana tahaka ny volomborona ny fanambaràna ataoko, saingy tokony ho mivaingana tahaka ny tendrombohitra ny fon'ny mpitsara."
Nakaton'ny mpandrindra ny fifandraisan-davitra ao Bangladesh ny tranonkalan'ny oniversite mpamoaka injeniera ahitana tatitra fanararaotan'ny mpianatra zokiny
Azia Atsimo 14 Oktobra 2019
Nandidy ny fanakanana ny pejy an-tseraseran'ny BUET ny Vaomiera Mpandrindra ny Fifandraisan-davitra ao Bangladesh (BTRC), satria nisy ny fitarainana miisa 175 mahery napetrak'ireo mpianatra taloha sy ankehitriny tsy mitonona anarana ao amin'ny oniversite injeniera ambony ao amin'ny firenena.